Dowladda Jabuuti oo beenisay in ciidamo looga dilay magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Dowladda Jabuuti oo beenisay in ciidamo looga dilay magaalada Muqdisho.
Mogadishu,Mar 5 – Dowladda Jabuuti ayaa beenisay war kasoo baxay ururka Al-Shabaab oo ahaa in laba askari oo kartirsan ciidamada Jabuuti in lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ku dhexmaray ciidamada Midowga Afrika iyo Al-Shabaab.
Safriika Jabuuti ee Soomaliya Dayib Dubbad Rooble oo shir jara\_’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay,inaysan jirin wax askari oo dowladda Jabuuti looga dilay magaalada Muqdisho.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu sheegay ciidamada dowladda Jabuuti inay weli ku suganyihiin goobihii laga dejiyay magaalada Muqdisho ayna weli bilaaban howlgaladii ay ciidanku kula dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab,balse waxaa uu sheegay inay filayaan dhowaan inay soo gaaraan ciidamo dheeraad ah,kadibna ay qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab.
Dowlada Jabuuti ayaa inka badan 100-askari u dirtay magaalada Muqdisho dhamaadkii sanadkii 2011-kii,si ay ugu biiraan howlgalka Midowga Afrika uu ka wado magaalada Muqdisho.